Fampandriana fahalemana :: Nosoloina ireo lehiben’ny Tafika mpampandry tany rehetra • AoRaha
Fampandriana fahalemana Nosoloina ireo lehiben’ny Tafika mpampandry tany rehetra
Haingana ny fan­draisana fepetra eo anivon’ny Tafika malagasy momba ireo Vondrona miaramila misahana ny fandriampahale­mana any amin’ireo faritra mano­kana na ny Zrps. Nosoloina avokoa tato anatin’ ny andro vitsy ny lehiben’ny Zrps miisa dimy. Nozaraina roa ihany koa ny Zrps Alpha izay nisahana an’Amoron’i Mania sy Matsiatra Ambony ka hatrany amin’ny faritra Atsimo Atsinanana.
«Tsy mety ny miaramila raha mijanona ela amin’ny toerana iray satria mety hite­raka tsy fahombiazana amin’ny asa izany. Voatendry hisahana andraikitra hafa ihany koa ireo jeneraly lehiben’ireo Zrps ireo teo aloha», hoy ny fanazavana azo momba ny antony nano­loana ireo tompon’andraikitra ireo tato anatin’ny fotoana fohy.
Loharanom-baovao hafa no nahafantarana fa mety misy ifandraisany amin’ireo olana sedrain’ny Zrps any am-panaovana ny asany ny nandraisana izao fepetra.
Betsaka ny olana sedrain’ ireo miaramilan’ny Tafika ireo any am-panaovana ny fampan­driana fahalemana ny toerana hiasany. Isan’ireny ohatra ny lonilony eo amin’ ny samy mpitandro filaminana sy ireo manampahefana sivily any amin’ireo toerana sasany. Mipetraka ny olana matetika noho ny fanagejan’ireo Tafika mampandry tany ireo omby an’arivony voalaza fa mampi­ahiahy. Toy ny zava-misy any Manja vao tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Omby miisa arivo mahery nogiazan’ ny Tafika. Milaza ny tompony fa manana taratasy ara-dalàna anefa ireo omby ireo.
Halatr’omby :: Miaramila miisa telo namoahan’ ny Fitsarana didy fampitondrana
EFOI – Regional :: Hampihaona ireo vehivavy mpandraharaha ny hetsika « Festival de fibre naturelle »